Sanadahaan ee Raadinta Miinada Sharafta leh - Akhri Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics online
Sannadahan Raadinta Miino-sharaf Celceliska 3 / 5 ka mid ah 2
N / A, waxay leedahay 717 views
Waad aqrinaysaa Sanadahan oo la raadinayo Miino -sharaf, cajiib ah manhwa.
Yu Ziyou iyo Zhong Wan waxay u adeegeen sayidyo kala duwan. Waxay mar ahaayeen kuwa ugu dhow nafaha waxayna ahaayeen cadowga ugu qadhaadh. Ka dib markii laga adkaaday loolankii carshiga, Zhong Wan wuxuu keenay labadiisii ​​sayid ee dhallinyarada ahaa isaga oo aaday xagga xuduudaha si uu u noolaado. Wuxuu ku tiirsanaa saaxiibtinimadii yarayd ee ka dhexaysay isaga iyo Yu Ziyou markay yaraayeen. Waxa uu amaahiyay qaar ka mid ah alaabtiisii ​​gaarka ahayd isaga oo sidoo kale ku tuuray tilmaamo kala duwan taas oo qof walba ka dhigtay inuu u maleeyo inay dhexdooda ka jirto wax u dhexeeya. Marka la eego joogitaanka awoodda leh ee Qabiilka Yu Yuud ee maxkamadda imbaraadooriyadda, muuqaalkaan xirriirka dhow wuxuu Zhong Wan u oggolaaday inuu ku noolaado nolol aad uga wanaagsan sidii hore. Sidan oo kale, sheekooyinkii uu kariyay waxay bilaabeen inay qaadaan miisaan aad iyo aad u badan. Iyada oo wararka xanta ah ee jaceylkooda jaceylka ah ay ku faafeen kun mayl oo safka ah, Yu Ziyou, oo ku yaal magaalo -madaxda fog, ayaa aakhirkii qabsaday dabayl jacaylkiisii ​​qotada dheeraa. Isagoo dhalanteed ah, Yu Ziyou, oo gebi ahaanba maskaxda laga xaday toddoba sano, ayaa rumaystay. Wuxuu u maleeyay wax gaar ah oo runtii dhexdooda ka dhacay sanadahaas…
Cutubka 53	October 6, 2021
Cutubka 52	October 6, 2021
Cutubka 51	September 18, 2021
Cutubka 50	September 25, 2021
Cutubka 49	September 9, 2021
Cutubka 48	September 9, 2021
Cutubka 47	September 9, 2021
Cutubka 46	September 9, 2021
Cutubka 45	September 9, 2021
Cutubka 44	September 9, 2021
Cutubka 43	August 17, 2021
Cutubka 42	August 17, 2021
Cutubka 41	August 17, 2021
Cutubka 40	August 17, 2021
Cutubka 39	August 17, 2021
Cutubka 38	August 17, 2021
Cutubka 37	August 17, 2021
Cutubka 35	August 17, 2021
Cutubka 34	August 17, 2021
Cutubka 33	August 17, 2021
Cutubka 32	August 17, 2021
Cutubka 31	August 17, 2021
Cutubka 30	August 17, 2021
Cutubka 29	August 17, 2021
Cutubka 28	August 17, 2021
Cutubka 27	August 17, 2021
Cutubka 26	August 17, 2021
Cutubka 25	August 17, 2021
Cutubka 24	August 17, 2021
Cutubka 23	August 17, 2021
Cutubka 22	August 17, 2021
Cutubka 21	August 17, 2021
Cutubka 20	August 17, 2021
Cutubka 19	August 17, 2021
Cutubka 18	August 17, 2021
Cutubka 17	August 17, 2021
Cutubka 16	August 17, 2021
Cutubka 12	August 17, 2021
Cutubka 11	August 17, 2021
Cutubka 10	August 17, 2021
Cutubka 9	August 17, 2021
Cutubka 8	August 17, 2021
Cutubka 7	August 17, 2021
Cutubka 6	February 5, 2021
Cutubka 5	December 15, 2020
Cutubka 4	October 24, 2020